မျက်မမြင်တွေအတွက် JAWS 8.0 Activation Key .. — MYSTERY ZILLION
မျက်မမြင်တွေအတွက် JAWS 8.0 Activation Key ..
April 2008 edited July 2008 in File Request
အသိတယောက်က မျက်မမြင် ပါ. .. သူ့စက်ကို Install တချို့လုပ်ပေးရင်နဲ့ သူ့ရဲ့ Jaw problem နဲ့ စတွေ့ ပါတယ်...
40 minutes ... trial version .. ဖြစ်လို့ minutes 40 ကြာရင် သုံးလို့ မရတော့ပါဘူး.. restart ပြန်ချပြီး သုံးမှရပါတယ်.....full version က $ 1800 ဆိုတော့ .. ဟီးဟီး...
JAWS 8.0 ပါခင်ဗျာ.. ကူညီပေးကြပါ... :77::77::77:
ဟုတ်လားတော့မသိဘူး။ တင်ပေးလိုက်ပြီ။ (http://www.mediafire.com/?bfyfnl4l4dx )(http://mihd.net/lkbf32t) အဆင်ပြေတဲ့နေရာကယူလိုက်တော့။ အဆင်မချောရင် တော့သူ့ဆော့ဖ်၀ါးလ်ပါတင်ပေးမယ်။
တစ်ခုလောက် မေးကြည့်ချင်လို့ပါ ....
Memory stick ထဲကို Data တွေ ထည့်ရင် ဥပမာ Folder တွေ ထည့်ရင် တစ်ခါတစ်လေ ကျ ရပြီး တစ်ခါတစ်လေ ကျရင် Folder အလွတ်ကြီး ပဲ ဝင်နေတာ ဘာဖြစ်တာလဲမ သိဘူး
နောက် တစ်ခြား Win RaR file တွေ လည်း icon ပဲ ပေါ်ပြီး နောက်ပြီး Excract လုပ်လို့ မရဘူး
folder option ထဲက system file ကို Hidden လုပ်ထားတွေ ကို ဖော်ကြည့်ရင် FOUND.000 ဆိုပြီး Folder တွေ တွေ့တယ် အဲ့ဒီထဲ မှာ .dll file တွေ အများကြီး ပဲ
အဲ့ဒါ Virus လား ဘာဖြစ်တယ် ဆိုတာကို သိရင် ဖြေပေးကြပါဦး:((:((
မဟုတ်ပါဘူး... Folder တစ်ခါတစ်လေ အလွတ်ကြီးပါပါလာတယ်ဆိုတာက ဖြစ်နိုင်တာ shortcut ထည့်မိတာ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်.. ဒါမှမဟုတ် အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ကူးမရတာဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်.. အများအားဖြင့် cut လုပ်တဲ့ အခါတွေမှာ ဖြစ်တတ်ပါတယ်... သာမာန် copy / paste လုပ်တဲ့အခါတွေမှာ အဲလိုဖြစ်တာ တွေ့ခဲပါတယ်...
R-click ကနေ sent to ကို ပို့လိုက်တာအထဲမှာ shortcut နဲ့မှားတတ်တာဖြစ်တတ်ပါတယ်..
နောက်တစ်ချက်ကတော့ stick ပျက်နေရင် အဲလိုဖြစ်တတ်ပါတယ်..
FOUND.000 ဆိုတာကတော့ windows ကနေ check disk လုပ်ထားတာတွေပါ... check disk လုပ်ပြီး disk ကို fix လုပ်ပြီးရင် အဲလိုလေးတွေ ချန်ထားခဲ့တတ်ပါတယ်... virus မဟုတ်ပါဘူး..
ကိုမင်းမောင် ....လင့်ခ်တွေက အလုပ်မလုပ်တော့လို့ ...
အဆင်ပြေမယ်ဆိုရင် ပြန်တင်ပေးပါလား ခင်ဗျာ ...
နောက် .... Jaws Version9အတွက်လဲ Crack လေးရှိရင် မစပါဦးဗျာ ...
jaws 8.0.422,8.0423 &9.0.552 ILM crack file တွေပါ.....
:105: ၀ါးလုံးခေါင်းထဲ လသာနေသူ....... :105:
ကိုကျော်မင်းခင်ဗျာ ....အခုလို ကူညီတာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ခင်ဗျာ ...
အခု ကျွန်တော် Run တော့ ...ဒီလို Error တက်လာတယ်ဗျ ....
အကုန်လုံးပဲဗျ ..jfw.exe ကို Run လိုက်ရင် ဖြစ်တာ ...
အဲဒီ Error လေးကို ဘယ်လို ဖြေရှင်းရင် ရနိုင်မလဲ ခင်ဗျာ ....
Jaw 9.0.552 Crack ပါ ပါတယ်။ http://www.zshare.net/download/156384184e00b93d/
ကိုတာယာ ရေ.....:D သိဘူးဗျ......:D.....
အစ်ကိုပြောပုံအရဆို FSScanMaps.dll ပျောက်နေတာပေါ...(ဘာလဲတော့ သိဘူး....:D)
Re-install လုပ်ကြည့်ပါလား.......ဒါမှ...မဟုတ် ကို mmmaung ပေးထားတဲ့ jaw 9.0.552_ILM
ကို DL လုပ်လိုက်လေ.....ကို mmmaung ပေးထားတဲ့ link မှာ crack ရောအကုန်ပါ ပါတယ်....
အဲဒါ ကိုသာ ဒေါင်းပေတော့ဗျို့..............
(ကျန်တာတော့ သားသားလဲ သိဘူး):D:D:D
ဒီမှာ များများသာ အော်ပေး....အစ်ကိုကြီးတွေရှိတယ်....ဟီး...ဟီး...